Makambani echi cannabis anotengesa sei mbanje?
Makambani cannabis anotengesa sei masheya?
Thomas Howard, aimbova stock broker & parizvino gweta we cannabis anotsanangura.
Cannabis Indasitiri Gweta
Nyeredzi Inokwira uye Inomiririra Gweta, iyo chete 2% yevamiriri vese vanogamuchira. Kudzidzira muchibvumirano litigation pamwe nekunetseka kune cannabis mabhizinesi.
Zuva rega rega, ini ndinopindura mubvunzo mumwe wakasununguka zvine chekuita nenyaya dzemutemo.
Bvunza zvako nhasi.
Makambani eMarijuana anopfuura nemuCanada vachienda kuUS Markets.
Thomas Howard aive pabhora uye akaita zvinhu. Easy kushandisa naye, inotaura chaizvo, uye ini ndaimurudzira chero nguva.
Kushanda naTom Howard kwaive kukuru. Akatibatsira kufamba muchibvumirano chekuvaka dzimba, uye chaihwo ruzivo rwakakura uye rwakabatsira!
Kubvunzana Mahara neGweta rekurima reIllinois
Kwete ndatenda, ini handisi kuda uyu.
Iyo cannabis stock vhidhiyo bulletpoints
Cannabis Gweta Vhidhiyo Pfupiso
1. Illinois cannabis Gweta & aimbova mutengesi webhokisi Tom Howard anotsanangura kuti makambani e cannabis ari kushandisa iyo Toronto Stock Exchange (TSE) kutenderera yakapoteredzwa neColoudled Sub Zvinhu Act (CSA) uye rondedzero yavo yemari yekutengesa mbanje panhamba dzeUS senge Nasdaq - semuenzaniso Tilray ( Daq: TLRY)
2. Kuti udzivirire bhizinesi rako re cannabis, ndapota ongorora taura nehofisi yedu nhasi - tel: (309) - 699-4691: Mabhizinesi eCannabis anotarisana nezvakawanda kusavimbika uye kupinda mumisika mikuru chinhu chikuru chazvo.
3. Iyo CSA inoita kuti zviome - kana zvisingaite - kumakambani eAmerica cannabis kunyora pamusika wechitoro nekuda kwekuuraya kwemhosva dzemubatanidzwa dzinobuda muchirongwa chembanje ini yekurutsa.
4. Canada ine cannabis yepamutemo kubvira Gumiguru 17, 2018, nekudaro makambani akaita seAurora Cannabis kunyora maviri stock yayo pane ese TSE uyezve kunyorawo paNasdaq.
5. Utongi hwaTrump hauna kutora danho rekumisa kutengeserana kweCanada cannabis masheya seTilary, kana Aurora, asi nechikonzero cheJeff Septs - isu tinogona kungofungidzira kana Dhipatimendi reRuramisiro kana Chengetedzo uye Dhivhisheni Commission richitora matanho ekuderedza iyo cannabis stock kutengeserana.
6. TSE haisati yatendera kunyorwa kwamakambani e cannabis anodzora zvinhu zveUnited States nekuti inotyora CSA pasi pemutemo weUS, asi vashandisi vazhinji munzvimbo ye cannabis vari kupatsanura makambani avo kubvumidza kunyorwa kwamaviri.
7. Rondedzero mbiri mbiri dze cannabis mumatura dzinobvumira makambani anoshanda muUnited States neCanada kuti ave mumusika PASI United States inodonha Cannabis kubva kuCSA kana bhiri rakafanana neiyo Chuck Schumer yakaunzwa muSeneti inopfuura. Saka chenjera.
8. Kana iwe uine mibvunzo yeCannabis Gweta, taura nehofisi yedu nhasi nekuda kwekubatsira kuzvigadzirisa neakaoma edu ekutengesa cannabis magweta.
Yekuwedzera Cannabis Stock Market Links
Hechino chakanyorwa cheForbes chinyorwa chinotsanangura mashandisiro anoita makambani eAmerica kuCanada kuratidza mazita avo munyika mbiri idzi kugadzirira kunyoreswa pamutemo.
Muchirevo chechinyorwa ichi, makambani anoenderana nembanje ari kunyatso kusvika kumahombekombe, aine maviri mahombe ETF, iyo Horizons Marijuana Hupenyu Sayenzi Index ETF (OTC: HMLSF) (TSE: HMMJ) uye iyo ETFMG Zvimwe Kukohwa ETF (NYSE: MJ) kutengeserana pane makuru masheya kuchinjana, uye mabhizinesi sous wekusakura Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON) uye cannabinoid-based biotech GW Mishonga yeMishonga PLC- ADR (NASDAQ: GWPH) kunyorwa paNasdaq, uye Canopy Growth kutengesa pane iyo NYSE.
Exceprt kubva pane yakanyanya kutsanangurwa chinyorwa cheBezinga maererano matanho ekutora mbanje kutengeserana mbanje - secyambiro kubva kune aimbove mutengesi - OTC masheya haasi mvura uye zvinetso zvekutengesa nekupinda uye kubuda - iwe wakanyeverwa asi nezvakawanda… iverenge zvese apa:
Kuverengeka Kusvika Pamutemo